विश्वविद्यालयमा भद्रगोलः सहप्राध्यापकले लिन्छन् प्राध्यापकको जाँच, नेपालीका प्राध्यापक कृषि र बनको प्रमुख « Pahilo News
विश्वविद्यालयमा भद्रगोलः सहप्राध्यापकले लिन्छन् प्राध्यापकको जाँच, नेपालीका प्राध्यापक कृषि र बनको प्रमुख
प्रकाशित मिति : 28 August, 2016 2:29 pm
१२ भदौ । अहेबले डाक्टरको जाँच लिँदा के होला ? उसले डाक्टरको योग्यता, क्षमता र गुणस्तरको मापन कसरी गर्ला ? दुई विश्वविद्यालयका सेवा आयोग अध्यक्षको नियुक्ति र उनीहरुको योग्यता हेर्दा त्यस्तै प्रश्न प्राज्ञिक क्षेत्रमा उब्जिएको छ ।
नेपालको पुरानो, ठूलो र उच्च शिक्षाका लागि पहिलो राष्ट्रिय शैक्षिक संस्था त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा ३८ केन्द्रीय विभाग छन् भने ६० को हाराहारीमा आंगिक क्याम्पस छन् । यसको अरु व्यवस्थापकीय भद्रगोलको शृङखलाको पाटो बेग्लै छँदैछ, योग्य जनशक्ति भर्नाका लागि खडा गरिएको सेवा आयोगमा भएको पछिल्लो नियुक्तिले थप लज्जास्पद अवस्था निम्त्याइदिएको छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा नैतिकताको ठूलो योगदान हुन्छ । तर, नियुक्ति खान जानेहरुले नै नैतिकतालाई लात हानेपछि त्यहाँवाट उत्पादित जनशक्तिले के सिक्ने ? यसरी नैतिकतासँग जोडिएको नाम हो– चैतन्य शर्मा । उनी अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको अध्यक्ष छन् । गत साउन ६ गते उनी सो पदमा नियुक्त भएका हुन् । रसायनशास्त्रका सहप्राध्यापक रहेका उनी त्यसवाट राजीनामा दिएर ०५६ सालको संसदीय निर्वाचनमा नवलपरासीबाट चुनाव लडेका थिए । चुनावमा पराजित भएपछि उनले ११ वर्ष मदन भण्डारी मेमोरियल कलेजको प्रमुखका रुपमा काम गरे । सेवा आयोग अध्यक्ष नियुक्त हुनुअघि उनी उच्च ममाध्यामिक शिक्षा परिषद्को उपाध्यक्ष थिए । शिक्षा ऐन आठौं संशोधनले परिषद् खारेज गरेपछि उनी त्रिवि आयोगमा गएका हुन् ।
रमाइलो कुरा त के छ भने उनी अवकाशप्राप्त सहप्राध्यापक हुन् तर अहिले प्राध्यापकको जाँच लिन्छन् । सहप्राध्यापकले प्राध्यापकको जाँच लिँदा के होला ? यसको परिणामको सहज अनुमान जो कोहीले लगाउन सक्छ । शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि भन्दै नयाँ शैक्षिक ऐन आएको बेला आयोगको अध्यक्ष जस्तो गरिमामय पदमा भएको उनको नियुक्तिले अरु त अरु उनैलाइ समेत गिज्याएको चर्चा प्राध्यापक वृत्तमा छ ।
त्यसरी नैतिकतालाई धज्जी उठाउने चैतन्य शर्मा एक्ला होइनन् । चितवनको रामपुरमा रहेको कृषि तथा वन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको अध्यक्षको हालत पनि त्यस्तै छ । सो विश्वविद्यालयका अध्यक्ष रामनाथ ओझलाई उनको पदले गिज्याइरहेको छ । नामले नै थाहा हुन्छ, यो भनेको कृषि र वन विषयसँग सम्बन्धित विश्वविद्यालय हो । त्यसैले पढाउने प्राध्यापक, सहप्राध्यापक, उपप्राध्यपकहरु पनि यिनै विषयका हुने नै भए ।
रमाइलो कुरा त के छ भने त्यस्ता शिक्षकहरुको छनौट गर्ने निकायको अध्यक्ष ओझा नेपाली विषयका प्राध्यापक हुन् ।
सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको सेवा आयोगको अध्यक्ष रामकुमार घिमिरे झापाका हुन् । कम्तिका शैक्षिक योग्यता, विषयको विज्ञता ख्याल नगरेपनि यस्ता राजनीतिक नियुक्ति गर्दा भौगोलिक समावेशिताको ख्याल समेत गरिएको छैन । सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यायल सेवा आयोगको अध्यक्ष हुन योग्य प्राध्यापकहरुको सुदूरपश्चिममा कमी छैन । तर, झापाका मान्छेलाई ल्याइएको भन्दै त्यहाँ पनि असन्तुष्टी छ ।